At 8/15/2012 09:04:00 PM2comments:
ကံဆီးဒေသမှာရှိတဲ့ KIA ကချင်တပ်မတော် တပ်ရင်း(၆)မှ ထွက်ပြေးလာသူ တပ်သား လထော်လဆန်ကို သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့မှာ ထရီဘွမ်အခြေစိုက် KIA ရဲ့ တပ်ရင်း(၁၄)က ပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းနဲ့ KIA လူကြီးတွေရဲ့အမိန့်နဲ့ သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်း ရင်နင့်ဖွယ်ရာ သတင်းကြားရပါတယ်။တပ်သား လထော်လဆန်ရဲ့ မိဘတွေက သူတို့မှာဒီသားတစ်ယောက်ပဲ အားကိုးစရာရှိတဲ့ အတွက် သေဒဏ် အထိအပြစ်မပေးဖို့ အမျိုးမျိုး တောင်းပန်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ KIA ဟာ အခုကာလကို စစ်ပွဲရဲ့ အရေးကြီး ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး သူတို့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို မလိုက်နာတဲ့
At 8/15/2012 08:53:00 PM No comments:
သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူးယစ်ဆေးဝါး လွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်သုံးစွဲနေ
သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) နမ့်ခမ်းမြို့ပေါ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ လွတ်လပ်စွာ ရာင်းဝယ်ဖေါက်ကားေ န သော် လည်း အာဏာပိုင်များဘက်မှ အရေးယူမှုမရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။နမ့်ခမ်းမြို့ မန့်နားရပ်ကွက်၌ ရာဘ (စိတ်ကြွရူး သွပ်ဆေး) အပါအ၀င် ဘိန်းဖြူ ၊ ဘိန်းမဲများ လွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ် သုံးစွဲ နေကြောင်း နမ့်ခမ်း မြို့ခံတ စ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။“မန့်နားရပ်ကွက်မှာဆို နေ့စဉ်ပွဲလိုလိုပဲ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲ တဲ့သူေ တွ ညနေပိုင်း ၄ နာရီလောက်ရယ် မနက်ပိုင်း ၉ နာရီ ကျော် လောက်ဆို အပြည့်ပဲ။အသက် ၂၀ ၀န်းကျ င် အရွယ် လူငယ်တွေအများဆုံးသုံးစွဲတယ်။ အဓိကသုံးစွဲတာက ယာဘပေါ့ ။ဘိန်းဖြူကတော့ ဒုတိယ အများဆုံးသုံး စွဲကြတယ် ” ဟု ဆိုသည်။
At 8/15/2012 08:51:00 PM No comments:
At 8/15/2012 08:47:00 PM No comments:
သြစတေးလျှရဲ့ အပြင်းထန်ဆုံး စီးကရက် ဥပဒေသစ်
စီးကရက်ကုမ္ပဏီများ အပေါ် ချမှတ်လိုက်တဲ့ အပြင်းထန်ဆုံးသော ဥပဒေသစ်တစ်ရပ်ကို သြစတေးလျှနိုင်ငံ က သြဂုတ်လ ၁၅ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဥပဒေအရ စီးကရက်ကု မ္ပဏီများက သူတို့ရဲ့ စီးကရက်ဘူးများပေါ်မှာ မည်သည့် လိုဂို၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ အရောင် ကိုမှ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခွ င့်ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘဲ အဲဒီအစား
At 8/15/2012 08:42:00 PM No comments:
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ လိပ်သောင်များ ဆယ်စုနှစ် တခုအတွင်း ထက်ဝက်ပျက်စီး
ရန်ကုန်(မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပင်လယ်လိပ်များ တက်ရောက်ခိုလှုံလေ့ရှိသည့်ဧရာဝတီ တိုင်း အ တွင်းရှိ လိပ်ကျွန်း၊ လိပ်သောင်များသည် ဆယ်စုနှစ်တခုအတွ င်း ထက်ဝက် နီးပါး ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ေ ကြာင်း လေ့လာသုတေ သနပြုသူ တို့က ပြောသ ည်။“လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ နှစ်လော က်ကတော့ နေရာ ၅ဝ လောက်တ က်တယ်။ ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ ၂၇ ခုလောက် ပဲရှိ တော့တယ်။ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းေ လျာ့ ကျ သွား ခဲ့တယ်။ အဲဒါက လေ့လာနိုင်တဲ့ေ နရာတွေကို သွားရောက်ေ လ့ လာပြီး စစ်တမ်းလုပ်ထား တာပါ။ တချို့ မသွားရောက် မလေ့လာနို င် တဲ့ နေရာတွေ လည်းရှိတယ်။ သွားဖို့လာ ဖို့ အခက်အခဲ ရှိတဲ့နေရာ တွေပေါ့။ အဲဒါတွေ ကလည်း သိပ်များများ စားစားေ တာ့မရှိပါဘူး”ဟု ဧရာဝ တီတိုင်းအတွင်း ပင်လယ်လိပ် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကို အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆော င်လျက်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
At 8/15/2012 08:40:00 PM No comments:
ဦးသန့် နှင့် ကျူးဘားခေါင်ဆောင် ကတ်စထရို
ကျူးဘား ဒုံးပျံအရေးအခင်းပြီးတဲ့နောက် ကျူးဘားမြို့တော် ဟားဗနားမှာ တွေ့ဆုံစဉ်
At 8/15/2012 08:29:00 PM No comments:
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရေကြီးဒဏ်ခံနေရသော ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့နယ်မှ စာသင်ကျောင်း ၄၁ ကျောင်းကို ဗုဒ္ဒဟူးနေ့မှ စတင်၍ ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်လိုက်သည်ဟု မြို့နယ်ပညာရေးမှုး ဦးကြင်သောင်းက မဇ္ဈိမ ကို တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် ပြောသည်။“ကျောင်းကို ရေထဲက ဖြတ်လာရတာဆိုတော့ ကလေးတွေမှာ အန္တရာ ယ် ရှိနိုင်တာရယ်၊ လှေနဲ့လာရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ များလာနိုင်တယ်” ဟု သူက ပြောသ ည်။ပိတ် လိုက် ရသော ကျောင်းအများစုသည် မူလတန်းကျောင်းများ ဖြစ်ကြပြီး အထက်တ န်းနှင့် အလယ်တ န်းကျောင်း ငါးကျောင်းခန့်လည်း ပါဝင်သည်ဟု အဆိုပါ မြို့နယ်ပညာရေးမှုးက ဆိုသည်။
At 8/15/2012 06:59:00 PM No comments:
ကလေးမြို့ရှိ တက္ကသိုလ်သုံးခုမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၇၀ ကျော်ကဆိုင်ကယ်ကို ဦးထုပ်ဆောင်ပြီးစီးရန် နှိုးဆော်သည့် တိုက်တွန်းမှုတစ်ရပ်ပြုလုပ်(ဓါတ်ပုံ)
At 8/15/2012 06:24:00 PM No comments:
At 8/15/2012 06:19:00 PM No comments:
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ယခုနှစ် အာရှနိုင်ငံတကာ ကလေးများရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ် ဒါရိုက်တာများကို ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်တရပ် က ဆိုသည်။အသက် ၁၂နှစ်မှ ၁၈နှစ်အတွင်းရှိ ခေါင်းဆောင် တဦး အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၀ ဦးကို “သင့်အတွက်ဘဝ” (Meaning of Life for you) ဖြင့် လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၂၄ရက် တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ မီနာမိအာဝဂျိမြို့မှာ ကျင်းပမည့် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
At 8/15/2012 06:06:00 PM No comments:
နယ်စပ်စခန်းနှစ်ခုတွင် စားသောက်ကုန် အရည်အသွေး ကြပ်မတ်မှု စတင်မည်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မြဝတီမြို့နှင့် မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ် မူဆယ်မြို့များတွင် တင်သွင်းသည့် စားသောက်ကုန်များ၏ အရည်အသွေး ကြပ်မတ်စစ်ဆေးမှုများ ယခုနှစ် မကုန်မီ စတင်ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ယင်းလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။“စားသောက်ကုန်တွေမှာ မသုံးသင့်တဲ့ ဓါတုဆိုးဆေးများ သုံးစွဲမှုနဲ့ အရည်အသွေးနိမ့်၊ ရက်လွန် စားသောက်ကုန် တင်သွင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ်။” ဟု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA) မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းဇော် က ပြောပါသည်။
At 8/15/2012 06:04:00 PM No comments:
ရန်ကုန်(မဇ္ဈိမ)။။အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်လုပ်ရာတွင် ဝယ်ယူသူဘ က်မှ ပေးဆောင်ရမည့် ရောင်းဝ ယ်ခွန်ကို တိုးမြင့်လိုက်ခြင်းကြောင့် လတ်တလော ဈေးကွက်တွင် အရောင်းအ ဝယ် နည်းပါးခြင်းမှာ နောက် သုံးလ ခန့် ဆက်ဖြစ်နေနိုင်ကြောင်း လုပ်ငန်းအကျိုးဆောင်များက ပြောသည်။ရန်ကုန်မြို့၊ မန္တလေးမြို့နှင့် နေပြည်တော်မြို့တော်များရှိ အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်များ အတွက် အရောင်းအဝယ် တန်ဘိုးအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၇ ရာခိုင်နှုန်း အပါအဝင် ဝယ်သူက ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်စုစုပေါင်း ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း အစား ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ယခုလ ၁၂ ရက်နေမှစ၍ အစိုးရက တိုးမြှင့်လိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ
At 8/15/2012 06:02:00 PM No comments:
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဈေးဝယ်နိုင်ရန်နှင့် ဘဏ်များတွင် အပ်နှံထားသည့် ငွေများ ပြန်လည် ထုတ်ယူနိုင်ရန် MPU (Myanmar Payment Union) ဟု အမည်ပေးထားသည့် ကဒ်တမျိုးကို စက်တင်ဘာလအတွင်း စတင် အသုံးပြုနိုင်တော့မည်ဟု အာရှိ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် (AGB) ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာ ဦးရဲမင်းဦးက မဇ္ဈိမကို ပြော သည်။"ဘဏ်တချို့မှာ စပြီးစမ်းသုံးနေပြီခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ဘဏ်တွေမှာလည်း စမ်းသုံးနေပြီ။ ဒါပေမယ့် သုံးစွဲသူတွေကိုတော့ ကျနော်တို့မပေးသေးဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေကိုပေးပြီး စမ်းသုံးနေပြီ။ ဒီလလုံးစမ်းပြီး ဘာချို့ယွင်းချက်မှ မတွေ့ဘူး အဆင်ပြေ ချောမွေ့တယ်ဆိုရင် စက်တင်ဘာမှာ အသုံးပြုဖို့ ကြေငြာမယ်။" ဟု ဦးရဲမင်းဦးက ပြောသည်။
At 8/15/2012 05:56:00 PM No comments:
ကိုကာကိုလာနှင့် ပက်ပ်စီတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်ရရှိရန် ပြိုင်ဆိုင်မှုမှာ ပြည်တွင်းအချိုရည် လုပ်ငန်းများ အခက်တွေ့ဖွယ်ရှိ...
ကမ္ဘာကျော် စားသောက်ကုန် အမှတ်တံဆိပ် ပက်ပ်စီကုမ္ပဏီက ၁၅ နှစ်ကြာ ပြီးနောက် မြန်မာနို င်ငံတွင် ပြန်လည်ဖြန့်ချိ ရောင်းချတော့မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်ကို ဦးကိုကိုကြီး၏ ဒိုင်းမွန်းစတားကုမ္ပဏီက ရရှိသွားသည်။
At 8/15/2012 05:51:00 PM No comments:
မန္တလေးတိုင်း မြင်းခြံ ခရိုင် ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ထဲမှ ကျေးရွာ ၂ ရွာတွင် အမျိုးသမီး ၂ ဦး ပုံစံတူ သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရပြီးေ နာက် ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့ပေါ်နှင့် ဒေသတွင်း ကျေးရွာနြေ ပည် သူ များ စိုးရိမ် ထိတ်လန့် နေကြကြောင်း သတင်းရရှိသည် ။ကျောက် ပန်းေ တာင် မြို့၏ တောင်ဘက် ၆ မိုင်ခန့်အကွာ၌ ရှိေ သာြေ ကာင်ဒူး ကျေးရွာသူ အသက် ၆၉ နှစ်အရွယ် ဒေါ်သောင်း ဆိုသူနှ င့် ယင်းေ ကျး ရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ ရေထွက် ကျေးရွာတွင် အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး တဦးတို့သည် စိတ်မူမမှန်သူ တဦး၏ သတ်ဖြတ်ခံမှုမျိုးဖြင့် ပုံစံတူ သတ်ဖြတ်
At 8/15/2012 05:21:00 PM No comments:
VOA နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အင်တာဗျူးအပေါ် တုံ့ပြန်မှုများ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် VOA (Voice of America) မြန်မာပိုင်း ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းတို့ သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြ န်းခန်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ပြောဆိုမှုများကို ပြည်တွင် နိုင်ငံရေး လောကတွင် တုံ့ပြန် ပြောဆိုမှုများ ရှိသည်။“ကျနော်တို့ ကွင်းဆင်းပြီးတော့ စစ်ဆေး ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ် ၀င်ရောက်လာတဲ့ သူတွေက မရှိသလောက် နည်းပါတယ်။ ဟိုးတုန်းကရှိနေတဲ့သူတွေက ပေါက်ဖွားမူတွေ သိပ်များတယ်။ အိမ်ထောင်စုတစုဆိုရင် ခုနှစ်ဆယ်၊ရှစ်ဆယ်လောက်ရှိပါတယ်” ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဘင်္ဂါလီများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခဲ့သည်။
At 8/15/2012 04:52:00 PM No comments:
ရခိုင်ဒေသကို တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန် မကြာသေးခင်က သွားရောက်ေ လ့ လာ ခွ င့်ပြုခဲ့တာဟာ ရခိုင်ဒေသ ပဋိပက္ခဖြေရှ င်း ဖို့ မြန်မာအစိုးရ လိုလားေ ကြာင်း ပြသလိုက်တာပဲ လို့ ကုလသမဂ္ဂ သံတမန်ကြီးတဦးက သုံး သပ် လိုက်ပါတယ်။သူကတော့ ဘန်ကီမွန်းရဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးအရာရှိ ဘီဂျေနမ်ဘီး ယားပါပဲ။“မြန်မာပြည်သားေ တွ ကြုံတွေ့ နေရတဲ့အခက်အခဲ ဖြေရှင်း ကြရာမှာ မြန်မာ အစိုးရက နိုင်ငံ တ ကာ နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုလိုလား လားရှိတယ်ဆိုတာ ပြ လိုက်တာပါပဲ။ဒီလို အပြုသေ ဘာေ ဆာ င်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို အထောက် အကူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်”လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
At 8/15/2012 04:51:00 PM No comments:
ဗုဒဘာသာနဲ့ မူဆလင် အုပ်စုတွေအကြား ပဋိပက္ခတွေ ပိုမိုကြီးမား လာအောင် တာလီဘန်တွေ ပါဝင်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို တစ်လွဲအသုံးချပြီး ဆောင်ရွက်နေတာတွေ မပြုလုပ်ဖို့၊ ဒီဓါတ်ပုံတွေကို ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းရှိ သတင်းမီဒီယာများအနေနဲက အသုံး မပြုကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တာလီဘန် ဘုန်းကြီးတွေ ပါဝင်နေတဲ့ ဒီဓါတ်ပုံတွေကို မူဆလင်နိုင်ငံတွေက ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ ဖြန့်ဖြူးနေတာ ဖြစ်ပြီး အဓိက အားဖြင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်စဉ်တွေကို သတင်းတင်ပြရာမှာ လူသေအေ လာင်းတွေေ ရှ့ မှာ တာလီ ဘန် ဘုန်းကြီးတွေ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ အသုံးပြု ဖော်ပြနေကြကြောင်း၊ ယင်းဓါ တ်
At 8/15/2012 04:43:00 PM No comments:
စစ်ကိုင်းတွင် ကျောင်းအုပ်က ကျောင်းသူများကို မဖွယ်မရာပြုမှု အမှုဖွင့် တိုင်ကြား
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ဒီပဲယင်း မြို့နယ် ဆင်ကျွန်ကျေးရွာ အခြေခံ ပညာ မူလတ န်းေ ကျာ င်း ကျောင်းအုပ်ကြီးက ကျောင်းသူ ကလေးငယ်များ အပေါ် မဖွယ်မရာ ကိစ္စများ ကျုးလွန် သဖြင့် အ ဆို ပါ ကျေးရွာရှိ ရပ်မိရပ်ဖများ က ယင်းကျောင်းအုပ်ကြီးကို မှုးကန် ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ဆင် ကျွန်ကျေးရွာရှိ ဒေသခံများက The Voice Weekly သို့ ပြော ကြားသည်။
At 8/15/2012 04:40:00 PM No comments:
ဥပေါင်း ၈၇ လုံးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် ထားသည့် ၁၇ ပေအရှည်ရှိ စပါးအုံးမြွေတွေ့ရှိ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖလော် ရီဒါ ပြည်နယ်တွင် ၁၇ ပေ အရှည်ရှိ စပါးအုံးမြွေ တစ်ကောင် တွေ့ရှိခဲ့ သည်။ အဆိုပါမြွေသည် ဥပေါင်း ၈၇ လုံးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် ထားကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက် အရ သိရသည်။၎င်း စပါးအုံးမြွေကြီး သည် ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်တွင် တွေ့ရှိရ သော မြွေများအနက် အကြီး ဆုံးမြွေကြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ အလေးချိန်မှာ ၁၆၄ ဒသမ ၅ ပေါင်ရှိသည်။အဆိုပါ စပါးအုံးမြွေ ကြီးအား ယခုနှစ် မတ်လအတွင်းက Everglades အမျိုးသား ဥယျာဉ်တွင် ဖမ်းမိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ လေ့လာကျက်စားပုံကို လေ့လာရန် ၎င်း မြေကြီး၏ နောက်သို့ သုတေသီများ က ခြေရာခံ လိုက်ကာ မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။
At 8/15/2012 03:14:00 PM No comments:
စစ်တက္ကသိုလ် အပါတ်စဉ်(၁၆) ၊အောင်ဇေယျ တပ်ခွဲဆင်းဖြစ်ပါတယ်။တပ်မတော်(ရေ)တွင် ဒုဗိုလ် မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အထိတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဇီးကုန်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီး ၊ လူရည်ချွန် ၂ ထပ်ကွမ်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်/အင်္ဂလန်တို့တွင်တပ်မတော်ဆိုင်ရာသင်တန်းများစွာတက်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်(ဂျ)ဂျီပီ ၊ အာအယ်(လ) သင်တန်းတွင် မြန်မာတပြည်လုံး ပထမ ရရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်မတော်ရေအမှတ် (၁ ) ထောက်လှမ်းရေးတပ်မူး၊ ကကလှမ်း ရုံးချုပ် စစ်ဦးစီးဒုတိယတန်း ထိုတပ်မတော် ( ရေ ) တွင်စစ်ဦးစီး ဗိုလ်မူးကြီးမှ စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် မှ ရေချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ၊လူမှုပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူတဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာ ဝါသနာပါသူတဦးဖြစ်ပြီး တပ်မတော်(ရေ) ဇာတ်ကားများတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ဘူးပါတယ်။ ဦးဝင်းဦး သီဆိုသော တိမ်လွှာမို့မို့လွင် သီချင်း သီဆိုရာတွင် ဦးဝင်းဦး ကဲ့သို့ထပ်တူ သီဆိုနိုင်ပါတယ်။
From - ဥက္ကာကိုကို Facebook
At 8/15/2012 02:14:00 PM No comments:
စားအုန်းဆီ သိုလှောင်ကန် များအတွင်း မြွေ၊ ကြွက်နှင့် ဖားအသေများ ကိုတွေ့ရှိနေရကြောင်း ကုန်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးကျော်ထူး က ပြောသည်။ ''ကျွန်တော်တို့ သွားစစ်ေ ဆးတော့ ဆီသိုလှောင်ကန်တွေအပြင် ဈေးကွက်ကို ဖြန့်ဖြူးတော့ ထည့်မယ့် ပီပါ ပုံးတွေ ကလည်း ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းမရှိဘဲ ထည့်သွင်း ဖြန့်ဖြူးနေ တာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်''ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် နယ်စပ် ဂိတ်များနှင့် ပင်လယ်လမ်းများမှ ဝင်ရောက်လာသည့် စားအုန်းဆီများ တင်သွင်း ရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်းကိစ္စအပေါ် စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီး ဌာနမှ ကြပ်မတ်တော့မည်ဟု သိရသည်။
At 8/15/2012 02:08:00 PM No comments:
Labels: စီးပွားရေးသတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း
"ပုဂ္ဂလိက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများအား တည်ဆဲဥပဒေအရ ဖျက်သိမ်းမည်"
ပြည်တွင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ပုဂ္ဂလိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သင်တန်း များမှာ တည်ဆဲဥပဒေအရ ဖွင့်ခွင့်မရှိ၍ အားလုံးဖျက်သိမ်းသွားရမည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။ '' ဒီသင်တန်းတွေ အသင်း အဖွဲ့တွေကို အရေးယူဖို့ကို ဘယ်ဝန် ကြီးဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုမှုနဲ့ ဖွင့်နေတယ်ဆို တာကို စစ်ဆေးပေးဖို့လည်း တိုင်း ဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် အစိုးရတို့ကို ပါ ညှိနှိုင်းထားပြီးပါပြီ။ ဥပဒေကြောင်း အရပဲသွားမယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေက လူ့အသက်နဲ့ ဆိုင်တယ်''ဟု အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြော သည်။
At 8/15/2012 02:04:00 PM No comments:
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှို င် အား ထိုင်းဘုရင့်ရေတပ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Surasak Rounroengrom ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ သြဂုတ်လ၁၅ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီ ၃၀မိနစ် တွင် နေပြည်ေ တာ် ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌ လာရောက်ဂါ ရဝြ ပုေ တွ့ ဆုံ သည်။
At 8/15/2012 01:52:00 PM No comments:
* ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပြန် လာမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ မှန်ပါ သလားရှင်၊ မှန်တယ်ဆိုရင် ဘယ်အချိန် လောက် မှန်းပါသလဲ။
-အခု သမ္မတကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရ ဒီ ဩဂုတ်လကုန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင် အဖြစ် ကျွန်တော်အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင် ခုနစ်ဦး လာဖြစ်ပါ မယ်။ မီးရထား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြောတာကတော့ သမ္မတကြီးကလည်း ခွင့်ပြုလို့ ဘယ်လို condition မှ မရှိဘဲ ကတိခံဝန်ချက်တွေ စည်းကမ်းတွေ လုပ်စရာမလိုခဲ့ဘဲ လာခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ လာတဲ့အခါမှာ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက် ဖို့အတွက် စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖြစ်ပါမယ်။
At 8/15/2012 12:45:00 PM No comments:
အခွန်တိုးလို့ အိမ်ခြံမြေဈေး ကျမလား
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး အိမ်ခြံမြေ ၀ယ်ယူသူက အနည်းဆုံး ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဝယ်ယူခွန် တိုးမြှင့်ပေးေ ဆာင်ရသည့် စနစ်ကိုပြောင်း လဲလိုက်ရာ အခွန်ရှောင်တိမ်းလိုသူများက အထူးကိုယ်စား လှယ်လွှဲစာဖြင့် အိမ်ခြံမြေရောင်းချမှု ပိုမိုတွင်ကျယ် လာ မည်ြ ဖစ်ကြောင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များက
At 8/15/2012 12:36:00 PM No comments:
ပါတီဝင် ၂၀၀ ကျော် NLD ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မတီကို ဆန္ဒပြမည်
ထားဝယ် ၊ သြဂုတ် ၁၅ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကော့သောင်းမြို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် (NLD)တွင် ခရိုင် / မြို့နယ် ညီလာခံ ကျင်းပရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရာ၌ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းမကျဟု ဆိုကာ ပါတီဝင် ၂၀၀ ကျော်က ပါတီ ရုံးရှေ့ ၌ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မ ည် ဟု ကော့သောင်းမြို့နယ် NLD မှ ဦးမျိုးလွင်က ပြောကြားသည်။NLD ဗဟို၏ ညွန်ကြားမှုဖြင့် တိုင်း ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်မှ ခရိုင် /မြို့နယ် ညီလာခံ ကော်မရှင်အား ဖွဲ့စည်းရာတွင် အများပြည်သူကို ချမပြခြင်း၊ပါတီဝင်များ သဘောဆန္ဒပါဘဲ လူတစ်စုက လုပ်ဆောင်ကာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးမျိုးလွင်က ပြောကြားသည်။
At 8/15/2012 11:51:00 AM No comments:
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် VOA သတင်းဌာန အင်တာဗျူး
In an exclusive interview with VOA Burmese Chief, Than Lwin Htun, Burma's President Thein Sein discloses that he and his government will open schools for Rohingya Muslims who have accused the Buddhist majority of human rights violation and persecution of the Rohingya people. Thein Sein believes that through education- the different communities may be able to live in harmony, while noting that Rohingyas should not be given Burmese citizenship.
At 8/15/2012 11:28:00 AM No comments:
ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်း
ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် အငြိမ်း စား ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးဥာဏ်ထွန်းက ဒုတိယ သမ္မတ အဖြစ် ကျမ်း သစ္စာ ကျိန်ဆို ပြီးဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်က လာသော သတင်း များ အရ သိရသည်။ဒုတိယ သမ္မတ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲသို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် တက်ရောက် ခဲ့သည်။
At 8/15/2012 10:56:00 AM No comments:
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏ နံပါတ် ၃ အဆင့်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Universite de Liege က ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး လုပ်ငန်းများအား တစ်စိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်နေသည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အား ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ အပ်နှင်းချီးမြှင့်မည့်အကြောင်း သမ္မတထံသို့ တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
At 8/15/2012 10:25:00 AM No comments:
Myanmar Egress ကို ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ ( UNFC) အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်သည့် ခွန်ဥက္ကာက ဝေဖန်
Myanmar Egress အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး အမြန် တည်ဆောက်ရန် အဖြေရှာလိုပါက ၄င်းတို့ အနေနှင့် အစိုးရ ပေါ်လစီကို အကောင်အထည် ဖေါ်သော NGO အဖြစ်မှ ရပ်ဆိုင်းရန် လိုအပ်သည်ဟု ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်သည့် ခွန်ဥက္ကာက ဆိုပါသည်။မြန်မာ အီးဂရက်က ရှင်းရှင်းပြောရရင် အစိုးရဘက်ကို လိုက်နေတဲ့ NGO ပေါ့ သူတို့က အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီမူဝါဒကို ဖြန့်ပေး နေတဲ့ အန်ဂျီအိုပေါ့ အဲလိုဖြန့်ချီပေးတဲ့နေရာမှာလဲ အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါ ပါဝင်လာခဲ့လို့ ဒီလိုပွဲမျိုးကို
At 8/15/2012 08:31:00 AM No comments:
- ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးအဖွဲ့ နုတ်ထွက်ပေးရန် ကိုယ်စားလှယ် ၃၀၀ ကျော် တောင်းဆို click
- ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ စောင့်ဆိုင်း click
- ထိုင်းကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ဆောက်မည် click
- သာပေါင်းမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ ၂၀၀ ကျော် ရေဘေးဒုက္ခရောက်နေ click
- ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေ ဗြိတိန် စိုးရိမ် click
- နိုင်ငံထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး RNDP ပါတီတွင်း ရှင်းလင်း click
- လောင်းလုံ ရေနံစက်ရုံအတွက် ဥယျာဉ်ခြံမြေများ အသိမ်းခံရဖွယ်ရှိ click
- လျှပ်တစ်ပြက် စွဲချက်တင်သင့် မတင်သင့် ရုံးချိန်းပေးလိုက် click
- ရွှေည၀ါဆရာတော် အမေရိကန်တွင် ခေတ္တသီတင်းသုံး click
- ရခိုင်ပါတီ နှစ်ခုခေါင်းဆောင်များ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံ click
- မလေးရှား ဓာတ်ငွေ့ ဂိုဒေါင် ပေါက်ကွဲ၍ မြန်မာ အလုပ်သမားများ သေဆုံး click
- ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ မှန်ကတ်မှုရှိရန် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ ထောက်ပြ click
- ကရင့်အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားများ click
- ထိုင်းရောက်အလုပ်သမားစာရင်းကွာ click
- နေရပ်ပြန်ဖို့ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေ စိုးရိမ် click
- ကေအင်ယူနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသွားများဆွေးနွေး click
- မြန်မာဘက်ကသွားသူတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာအဖမ်းခံရ click
- ကုလအကဲခတ်တွေ ဆီးရီးယားက စတင်ထွက်ခွာ click
- တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်မည် click
- ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှု တရုတ်အပေါ် ဝေဖန်မှုတွေပိုတိုး click
- တပ်တွင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်း အပြောင်းအလဲ အီဂျစ်မီဒီယာ ချီးကျူး click
- အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အေ နှစ်ဖက်လုံး လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက် click
- ဆီးရီးယား လေယာဉ် ပစ်ချခံရမူ ဗီဒီယို သူပုန်တွေဖြန့်ချီ click
-ကချင်ပြည် အခြေအနေ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် သေချာ စုံစမ်းသင့်ဟု KWAT ပြော click
- Google မှ အလုပ်သမား ၄,၀၀၀ အလုပ်ဖြုတ်မယ် click
At 8/15/2012 08:08:00 AM No comments: